Perikopa Fjkm Alahady 14 Jolay 2013 | FJKM Amboniloha
Perikopa Fjkm Alahady 14 Jolay 2013
Lohahevitra : Manantena fitahiana ny mino
Genesisy 49: 22-26
22 JOSEFA dia sampana mahavokatra, eny, sampana mahavokatra eo anilan-doharano; ny rantsany mananika mihoatra ny fefy.
23 Nampahory azy ny mpitifitra, dia nitifitra azy sy nanenjika azy;
24 Kanefa mateza hery ny tsipìkany, ary mailamailaka ny sandrin-tànany, avy amin’ny tànan’Ilay Maherin’i Jakoba, dia avy ao amin’ny Mpiandry, Izay Vatolampin’ny Isiraely,
25 Avy amin’ny Andriamanitry ny rainao, ka Izy hamonjy anao avy amin’ny Tsitoha, ka Izy hitahy anao: Dia fitahiana avy amin’ny lanitra any ambony, sy fitahiana avy amin’ny lalina, izay mamitsaka any ambany, ary fitahiana avy amin’ny nono sy ny kibo.
26 Ny tso-dranon’ny rainao dia mihoatra noho ny havoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin’ny tendrombohitra fahagola; ho eo an-dohan’i Josefa izany, dia ho eo an-tampon-dohan’ilay nalaza tamin’ny rahalahiny.
Marka 10: 46-52
46 Ary tonga tao Jeriko izy; ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mbamin’ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanak’i Timeo.
47 Ary nony reny fa, injay! Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe: Ry Jesosy, Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko!
48 Ary maro no niteny mafy azy mba hangina; fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe: Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko.
50 Dia nanary ny lambany izy ka niantsambotra nankeo amin’i Jesosy.
52 Ary hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin’izay ny masony, ka nanaraka an’i Jesosy teny an-dalana izy.
Galalatiana 3: 10-14
10 Fa izay rehetra amin’ny asan’ny lalàna dia eo ambanin’ny fanozonana; fa voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra ao amin’ny bokin’ny lalàna (Deo. 27. 26).
11 Ary hita marimarina fa amin’ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan’Andriamanitra ; fa ny marina amin’ny finoana no ho velona* (Hab. 2. 4). [* Na: ny marina ho velon’ny finoana]
13 Kristy nanavotra anay tamin’ny ozon’ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay Izy; fa voasoratra hoe : Voaozona izay rehetra mihantona amin’ny hazo (Deo. 21. 23),
14 mba ho tonga amin’ny jentilisa ny fitahiana an’i Abrahama ao amin’i Kristy Jesosy, ary mba horaisintsika amin’ny finoana ny teny fikasana ny amin’ny Fanahy.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 9 juillet 2013